अन्तर्वाता दिपक महत, चन्द्र रिचाल
प्रकाशित मिति: 2015/08/02
अन्तर्वाता दिपक महत
पर्यटन बोर्डमा देखिएको बेथितीका विरुद्ध आन्दोलनको उभार सृजना गर्नुभयो । सँगसँगै पर्यटकीय संघसंस्था र व्यवसायीहरुलाई एकढिक्का बनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । त्यसमा चाही चुक्नुभयो है ?
पर्यटन बोर्डमा व्यक्ति सिर्जिन बेथितिका विरुद्धमा हामी जाईलाग्यौँ । जहाँसम्म टानको कुरा गर्नुभो, यो टानले मात्र गर्ने कुरा होइनन् । यहाँ त जेटीसीसी छ, यसमा एउटा सदस्य संस्था टान पनि रहेको हुँदा, हामी सबैले गर्ने कुराहरु हुन् । आन्दोलन पछाडि यसको उपलब्धी संरक्षण गर्ने क्रममा आन्दोलनमै लागेका केही व्यक्तिहरुमा देखा परेको लोभलालचा र गुटगत संकिर्णताका कारण हामीले सोचेको रुपमा उपलब्धीको संरक्षण हुन सकेको लाग्दैन । यद्यपी, बेथितीका विरुद्ध आन्दोलन गरेका कारण भोली आउने नेतृत्वले यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ बनेको छ । वेथिती गर्नेहरुका लागि सतर्क बन्ने स्थिति बनेको छ ।
जेटीसीसीको प्रसंगमा आन्दोलनको एउटै मोर्चामा रहेका व्यवसायीहरु अहिले संस्थामा राजनीति भयो र यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर बाहिरिएका छन् ?
यो आरोपमाथि म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु, जेटीसीसीमा कसरी राजनीति भयो ? आरोपमात्र लगाएर भएन प्रमाण पनि दिनुप¥यो । अर्को कुरा जसले संस्था माथि यो आरोप लगायो उहाँहरु आफैँ राजनीतिक चंगुलमा फस्नुभएको छ । उहाँहरुबाट बारम्बार हामीले पर्यटन बोर्डमा जेटीसीसीले निर्णय गरेको दुईजना सदस्य राख्ने भन्दा संस्थागत रुपमा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेका टान र नाट्टाका अध्यक्षहरु गए । उनिहरु संस्थागत प्रतिनिधि भएर गएका हुन, नकी दलविषेशको भनेर । दलको नाममा अलग्गिएर जानेहरुले यस्तो आरोप लगाइरहनु भएको छ । हाम्रो दलको मन्त्री भएको मन्त्रालयमा नियुक्ति जति सबै हाम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ । पर्यटन बोर्डले जेटीसीसीलाई दुईजना प्रतिनिधि पठाउन पठाएको पत्र अनि जेटीसीसीले संघसंस्थाबाट सिफरिस भएर आएअनुसारको दुई जनालाई निर्णय गरेर सिफारिस गरेको पत्र म दिनसक्छु । तपाइँले हामीले राजनीति गरेका कुरा उहाँहरुबाट सुन्नु भयो । यो गलत छ, राजनीति त उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ ।
राजनीति तपाईको पक्षले गरेको की अर्को पक्षले ?
राजनीति उहाँहरुले गरेको हो । हामी पेसागत हकहितका लागि एक ठाउँमा उभिएका छौँ । सत्ताको आडमा त्यो भन्दा ठूलो उपलब्धी यतै पाइन्छ भनेर सामूहिकता छाडेर संक्रिणतातिर लाग्नुभयो । सामूहिकताको कुरा गर्ने, संघसंस्थाहरुविच एकता कायम गर्ने हामीहरुले राजनीति गरेको होइन । यदि यसलाई राजनीति गरेको भनिन्छ भने म त भन्छु यस्तै राजनीति गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले गरेको आदर्शको कुरा त व्यवहारमा देखाउन सक्नुभएन नि ?
सफलता र असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिगत र संस्थागत जिवनमा निरन्तर आइरहने कुराहरु हुन् । केही पक्षले लोभलालचा र संक्रिणता बोक्यो भन्ने नाममा हामी असफल भएको भन्ने लाग्दैन । जसले गुटगत स्वार्थ बोक्यो, लोभलालचा बोक्यो, मन्त्री आफ्नो भएको मन्त्रालयमा सबै नियुक्ति आफ्नो मात्र हुनुपर्छ भन्यो उहाँहरु असफल भएको हो । सामूहिक कार्य, नेतृत्व र गन्तव्य भएकाहरुको माहोल जो थियो, त्यसबाट अलग्गिनेहरु असफल भएका हुन् । सामाजिक र व्यक्तिगत जिवनका उतारचडावहरुलाई तपाइँले असफलता भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ ।
जेटीसीसी जिवितै छ, औचित्य नसकिएको भन्ने आधार चाँहि के छ ?
यसको आधार के हो भने हामी अधिकांश संघसंस्था अहिले त्यहीँ छौँ । एउटा दलसँग सम्बन्धित साथीहरु छुटेर जानुभएको छ । कतिसम्म भनेका रहेछन् भने हामीले धेरैलाई समेट्यौँ हाम्रो संस्थालाई एक बनाएर राख्नु, आवश्यकता परेको खण्डमा एकै ठाउँमा उभिनु र दिशानिर्देश गर्नु थियो, कसैको अभिप्राय एउटा व्यक्ति विशेषको विरोधमा मात्रै सीमित रहेछ । आन्दोलनमा व्यक्तिगत रिसइवी र बदलाको भावना भएकाहरु पनि मिसिएर आएका रहेछन्, अनि त्यस्ता मान्छेहरुले स्पस्ट रुपमा घोषणा गरेका छन् कुनै अमुक व्यक्तिको विरुद्धमा लाग्नु थियो त्यो व्यक्ति सिद्धिएको हुनाले बाँकी काममा जेटीसीसीको आवश्यकता छैन भनेर भनेका छन् । यो स्वार्थको पराकाष्ठा हो । यस्ता मान्छेहरु अलग्गिएका छन् । यसअर्थमा विचबाटोसम्म मात्रै लागेर मेरो स्वार्थ सकिहाल्यो अब किन लाग्नु भन्नेहरुले औचित्य सकिएको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यसो भए उहाँहरु असफल हो ?
सफलता र असफलताको मापदण्ड म जान्दिन् । तर, तपाइँ सञ्चारमाध्यमले के देख्नुहुन्छ, यसरी एक्लिएर हिँडनेहरु सफल भए कि असफल भए त्यो तपाइँहरुले मूल्याङकन गर्ने कुरा हो । हामी सफल छौँ भनेर हामी भन्छौँ ।
अब तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
हाम्रा हरेक बैठकहरुमा हामीले उहाँहरुलाई आह्वान गरिराखेका छौँ । उहाँहरुले आफुलाई निस्केको घोषणा गर्नुभो तर हामी उहाँहरु निस्किनुभयो भनेका छैनौँ । उहाँहरुलाई प्रत्येक कार्यक्रमहरुमा खबर जारी गरेका छौँ ।
तपाई टानको पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । टानले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । ठीक हो ?
टानले भूमिका खेलेन भन्ने कुरा हेर्ने आँखामा पनि भर पर्छ । हामीले टानले गरेका गतिविधिहरुलाई हेरौँ पहिले । टानले थुप्रै राम्रा काम गरेको छ, त्यसपछि चैँ के–के गर्न सकेन चर्चा गर्न सकिन्छ । टानले केहि गर्न सकेन भन्ने निरासावादी सोच आफैँमा पूर्वाग्रही छ । टानले आफ्ना कामहरु गरिरहेकै छ ।
अन्तर्वाता चन्द्र रिचाल
तपाईहरु जेटीसीसीबाट बाहिरिनुभएको छ, खास किन ?
पर्यटन बोर्डको ऐन नियम वा नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । हामीले त्यो आन्दोलन गर्दा केहि नियम र कानुनमा बसेर मैले काम गरेको छु भन्ने मान्छेलाई पनि सरकारले हैन सरकारले यसरी जवरजस्ती ढंगले नियम कानुन मिचेर हैन यो दादागिरीको रुपमा चलेको कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ समाधान गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको हो । यसमा अडानमा थिएँ पछिल्लो अवधिमा आईसकेपछि साथिहरुको नियत गलत देखियो । जब व्यक्तिगत गुटगत स्वार्थ देखियो । त्यो मलगायत केहि व्यवसायीहरुलाई मन परेन र मैले यो ठिक छैन । यसको औचित्य समाप्त भयो फेरि पनि त्यस्तै एजेन्डाहरु आउँदा जस्तो हामी अहिले लागिराखेका छौँ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका साथीहरुसमेत अगाडि बढेर पर्यटन क्षेत्र भूकम्पपछि कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले अहिले बाह्रबुँदो हुदैँ बाइसबुँदे एउटा आधारपत्र तयार गरेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा हामीले दिएका छौँ । यो पनि एउटा जेटीसीसी जस्तै हो । तर, त्यहि जेटीसीसी नाम लिएरै सबै जना बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।
यो जेटीसीसीकै समानान्तर संस्था हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
होइन । यो जेटीसीसीको समानान्तर संस्था होइन । हामी जेटीसीसी भन्ने संस्था जतिखेर बन्यो त्यो सदाका लागि समान रुपमा रहिरहनु पर्छ भन्ने चाहन्नौँ र पर्यटन क्षेत्रका विकासका लागि मिल्ने कुराहरुका लागि ‘इस्यु’का आधारमा सबै साथीहरुलाई मिलाएर लान जेटीसीसीका ठाउँमा अर्को कुनै नाम पनि हुन सक्छ । हिजो एक समय यसले काम गरेको थियो, पछि आफ्नो मार्गबाट च्यूत भैसकेपछि विभिन्न सवालहरुलाई समेट्ने हिसाबमा साथीहरु मिल्ने कुरा कसरी अनौठो हुन सक्ला र ?
जेटीसीसीको आचित्य समाप्त भयो भन्ने आधार बताइदिनुस न ?
जेटीसीसीको औचित्य अब समाप्त भएको हो । अब जेटीसीसी भन्ने नामले चाँहि पर्यटन क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई समेट्न र निरुपण गर्न सक्दैन । त्यहाँचाहिँ गुटगत स्वार्थ देखियो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि साथीहरुलाई भूलबस रुपमा लगाउने र आफ्नो स्वार्थ मिल्नेवित्तिकै साथीहरुलाई गलत ढंगले उपयोग गर्ने भएका केहि व्यक्तिहरु त्यहाँ देखियो । सो देखिरहेपछि इमान्दार मान्छे अथवा सामूहिक भावनाका साथ पर्यटन क्षेत्रको (पर्यटन क्षेत्रभित्र कुनै गुट, राजनीति हुुँदैन) विकासका लागि चिन्तन गर्ने मान्छे अट्न सकेनन् ।
तर, त्यो भन्दा अलिक बढी चाँहि राजनीतिक टकराव हो कि ?
बाहिर देखिँदा धेरै साथीहरुले त्यो भन्छन् । विभिन्न ठाउँमा उभिँदा उसको भूमिका विभिन्न स्थितिको हुन्छ, म नेपालको एउटा नागरिक हो म राष्ट्रको अहित हुने काम गर्दिन । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको एउटा व्यवसायी भएको हुनाले पर्यटन क्षेत्रका मुद्दाहरुमा, चाहे त्यो सरकारमा होस् वा कुनै राजनीतिक दलमा उभिँदा नै किन नहोस, त्यो मुद्दामा म कहिल्यै पनि खुट्टा कमाउने व्यक्ति होइन । तसर्थ विभिन्न भूमिकामा विभिन्न तरिकाले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसरी नै समाज चल्ने हो । म एउटा पर्यटन व्यवसायी हुँ, यसमा रहँदा म व्यवसायी हुन्छु, अन्त कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा जाँदा सो दलको सदस्य हुँला । तर, मुख्य कुरा आफु रहेको ठाउँमा रहँदा सोअनुकुल भूमिका निर्वाह गरेँ कि गरिन भन्ने कुरा हो । केही साथीहरुको सो देखिएन, हरेक ठाउँमा एउटै भूमिका । सबै ठाउँमा छोरोको भूमिका हुँदैन, सबै ठाउँमा बाउको भूमिका हुँदैन । त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे सफल हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
तपाइँहरु माथि लागेको एउटा गम्भिर आरोप के छ भने तपाइँहरुको एउटा गुट छ । त्यो गुटचाँहि मन्त्रालय,
पर्यटन बोर्ड हुँदै पर्यटकीय संघसंस्थाहरु र व्यवसायीहरुसम्म फैलिएको छ । यो सत्य हो ?
यस्तो छैन । यो गलत आरोप हो । यो उहाँहरुको दिमागमा घुसेको गलत मनसाय हो । उहाँहरुले हिजोदेखि आफुले गर्दै आएको कुराहरुलाई अरुले गरेको भन्न खोजेको हो भन्ने लाग्छ । कित तथ्यगत आधारमा भन्न सक्नुप¥यो । हामीले हिजो पर्यटन बोर्डमा आन्दोलन गर्दा पनि यहाँ–यहाँ भ्रष्टाचार भयो, यहाँ अदालतले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर तथ्यगत आधारमा भनेका थियौँ । साथीहरुले तथ्यगत आधारमा भन्नुप¥यो किनकी सरकार एउटा दलको हुन्छ, मन्त्री अर्को पार्टीको हुन्छ । उसले नियमभन्दा बाहिर काम गरेको हो, सो कुरा भन्न सक्नुप¥यो । होइन भने आफु कुनै ठाउँमा जान पाइन, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन, आफुलाई ठूलो मान्छे बनाएन भन्ने आधारमा लगाएको आरोप सहि हुन सक्दैन । जजसले आरोप लगाउनु भएको छ, उहाँहरुले नीतिगत रुपमा यो–यो कुरा नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयको ऐन, नियमावलीले पार्टीगत रुपमा काम ग¥यो भन्ने प्रमाणगत तर्क छ भने हिम्मतका साथ हामीसँग बहस गर्न आउन म चुनौती दिन्छु । नत्र, विना प्रमाण बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । जो आफु गलत काम गर्छ उसैले गलत अफबाह फैलाउँछ । यहाँ कुनै राजनीति पूर्वाग्रहका आधारमा काम भएको छैन ।
टान निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा भावी नेतृत्वको लागि तयारीमा जुट्नुभएको छ नि हैन ?
टानको आगामी नेतृत्व सर्वसम्मतीबाट जानुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । सकेसम्म सहमती नै कायम गरेर एउटा क्षमतावान व्यक्तिको नेतृत्वमा जाने कुरामा विरोध गर्ने कुरै रहेन । अर्को आफ्नो क्षमताको कुरा गर्दा म आफू वर्षाैदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लागेको छु । आफ्नो श्रम र पसिना खर्चेको छु । अन्यमा भन्दा यसमा राम्रो अनुभव र दक्षता संगालेको छु, यति हुँदा पनि आफ्नै क्षमतामा विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा रहदैन । मैले राजनीति गरेको छैन, मलाई अनुचित लाभ लिनु छैन ।